गरिब देशका धनाढ्य मन्त्रीहरू: बुझाए सम्पति विवरण, कसको कति सम्पति ? « Deshko News
गरिब देशका धनाढ्य मन्त्रीहरू: बुझाए सम्पति विवरण, कसको कति सम्पति ?
एकतिहार्इ नेपालीलाई बिहान–बेलुकी छाकटार्न मुस्किल परिरहेको मुलुकका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
सरकार परिवर्तन हुँदा प्रायः मन्त्री हुन नछुट्ने गच्छदारको सुनसरी दुहवी नपामा २(७ वर्गमिटरमा रहेको २ कोठाको टिनको छाना भएको पक्की घर, श्रीमती निर्मलाको नाममा विराटनगर महानगरपालिका(१५ मा दुईतले पक्की घर छ। त्यसैगरी, ७५ तोला सुनका धनी गच्छदार र उनकी श्रीमतीको नाममा दुहबी, विराटनगर, ललितपुरको बुङमतीलगायत विभिन्न स्थानमा जग्गा-जमिन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएका मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा धनी मन्त्रीका रुपमा उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ देखिएका छन्। उनको सम्पत्ति हेर्दा उनी अर्बपति मन्त्रीका रूपमा देखिएका छन्।
उनको स्याङ्जा, पोखरा, रुपन्देही, काठमाडाैंको कुलेश्वर र ललितपुरमा गरी सातवटा पक्की घर रहेको छ। उनको विभिन्न नाममा करोडौं मूल्यका जग्गा छन्। मन्त्री श्रेष्ठ र उनको परिवारका सदस्यको नाममा चार वटा गाडी रहेका छन्। गच्छदारसँग एक थान राइफल र १ थान बाह्रवोरको बन्दुक छ।
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइराला र गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का पनि करोडपति देखिएका छन्।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएकामा २१ जना मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री छन्। सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत सम्पूर्ण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।